जनताकाे नेता जनताकै घर दैलाेमा हुन्छन , राजधानीमै लुक्ने त शक्तीकाे भरमा अडेका हुन – Sudarshan Khabar
आज भन्दा ठिक साढे दुइ बर्ष अघि देशमा निर्वाचन भयो सबै पार्टिका उम्मेदवार भिडे कोही स्थानीय नै भिडे कोही केन्द्र तानिए । स्थानीय नेता हारे सत्ता र पावर राजधानीमा बसोबास गर्नेको हातमा पुग्यो ।
जनताको आशा थियो होला केन्दको पावरले धेरै सुविधा पाउने धेरै बिकासका योजनाहरु ल्याउने तर वास्तविकता त्यो सोचको विपरीत हुन पुग्यो । चुनावमा ढोग गर्दै हिड्ने निर्वाचित नेताले पछि नाक मुख पनि आफ्ना मतदातालाइ देखाउन पुगेनन् । दिन विते , बर्ष बिते एक हैन दुइ बर्ष पनि वित्यो तर पनि नाकमुख देख्न पाएनन् , पाउँदै पाएनन्
हो यस्तै व्यथा छ कंचनपुर क्षेत्र नंबर १ मा पनि । न त्यहाँ सिमा विवनद मिलाउन सकियो न त कुनै विकासका काम ल्याउननै सकिए झन बन्न लागेको कामको पनि हिनामिना हुन पुग्यो जनतालाई केन्द्रले वास्तै गरेन अझ भनौं जित्नेले नै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र भुले । जनतामा कुनै हर्ष छैन बरु दुखि पककै छन किनकी उनीहरु अहिले भन्ने गर्छन स्थानीय नेतालाइ हामीले वास्ता गरीएन अहिले जित्नेले हामीलाइ वास्ता गरेनन् ।
न विकास भयो न सिमा विवाद सल्ट्याइयो बरु राम्रो काम गरीरहेका सिडियो लाइ नै सरुवा गराइयो ।
यसरी आफु निर्वाचित भएको ठाउनै नजाने निर्वाचित उम्मेदवार अरु कोही हैनन् सत्ता रुड दलका अध्यक्ष क. प्रचण्डकी बुहारी बिना मगर हुन । उनी त्यही भोटले खानेपानी मंत्री भइन तर जनताले मानीएकी मंत्री हुन सकीनन ।
२०७७ सालको सुरुवाती समयबाटै देश तथा विश्वमै कोरोना महामारी मच्चीयो गरीब ,दुःखी , मजदुरी गरी खानेको छाक राकीयो । गरीबको घरमा आगो बल्न छाड्यो रागले भन्दा भोकले मरीन्छ कि भन्ने समय आयो । कति ‘आ’त्मह’त्या’ गर्ने अवस्थामा पुगे कतिले गरे तर पनि मंत्री मगरको ध्यान रत्ती गएन ।
पुर्ब माननीय एवम् संविधान सभा सदस्य नेपाली कांग्रेस का लोकप्रिय नेता दिवान सिंह बिष्ट को भगवानरुपी आगमन
२०७० सालमा विना मगरलाइ हराएका ंपुर्ब माननीय एवम् संविधान सभा सदस्य नेपाली कांग्रेस का लोकप्रिय नेता हुन दिवान सिंह बिष्ट । उनलाइ २०७५ सालमा नजितेकोमा कुनै ग्लानी छैन न त कुनै गुनासो छ मात्र उनलाइ जनताको पिरले सताउने गर्छ, देशको सिमानाको पिरले सताउने गर्छ । उनीसँग जनताले सुख साटेनन् होला तर जनताको दःुखमा सधै नै सहयोगको पात्र बनीरहे बिष्ट । नेता भनेको जनताको प्रतिनिधि हो , जव जनताको नै मतलब नेताले गर्दैन भने त्यो नेता नै हैन भए पनि पावर र पैसामा टिकेको हुन्छ, दिर्घकालिन हुदैन ।
बिष्ट सत्ता र पैसाको लोभ भन्दा पनि जनताको घरमा चुलो बलेको छ की छैन , गरीबको गास काटीएको पो छ की ? कोही अलपत्रमा पो परेको छ की ? भन्ने कुरामा बढी ध्यान दिने गर्दछन ।
चैत्र ११ , २०७६ बाट नेपालमा लकडाउन भयो । सबै काम कारवाही रोकीए । गरीबको काम गर्ने हात राकीयो खाने हातपनि रोकीन पुग्यो , बिरामीले औषधी पाउन पनि धौ धौ भयो तर यति हुदासम्म संकट हुदा पनि खानेपानी मंत्रीको कुनै पनि चासो रहेन । स्थानीएमा त्रास देखीन लाग्यो , साथ कसैको पाएनन । जस्को आस गरेर भोट दियोैं उसैले मतलव नगरेको भन्दै जनता आक्रोसित हुन थाले । त्यहाँ भगवानकै आगमन जस्तै हुन पुग्यो नेता बिष्टको आगमन ।
दःुखी र मजदुरी गर्ने जनताको हातमा हात मिलाउन पुगे जनताका प्यारा नेता बिष्ट । बिहान बेलुका गास नपाउनेलाइ खानाको ब्यवस्था गरे , औषधी नपाउनेलाइ औषधीको व्यबस्था गरे, माक्स र सेनीटाइजर को आफ्नो क्षेत्रमा कमी हुन दिएनन् । ५०००० भन्दा बढि माक्स वितरण गरे, जनचेतना दिन थाले , अन्तत जनताले उनलाइ भगवानको रुप नै दिन थाले ।
यति मात्र हैन कंचनपुर क्षेत्र नंबर १ मा भारत र नेपालको सीमा विवाद पनि उत्तीकै चर्को छ । तर यता मंत्री मगरको भने एक प्रतिशत पनि ध्यान गएको देखींदैन । तर बिष्ट भने आफ्नो जमिन ,भुभाग छाड्ने पक्षमा छैनन निडर भएर चट्टा सरी अडिक रहेर लागी परीरहेका छन।